Salama ny anarako dia bilen ushule avy any Etiopia aho, mpianatry ny fivarotam-panafody taona fahatelo aho te-hampihatra an'ity vatsim-pianarana ity ary tiako ny tolotra omenao. Mitady vatsim-pianarana maimaim-poana aho satria tsy mahay mandoa. Mandalina fitantanan-draharaha any Oganda aho, ny taona ho avy no taona faharoa sy farany ho an'ny taona. Koa te-hanohy ny mari-pahaizana manokana momba ny banky sy ny vola aho.
Tena ilaiko ny vatsim-pianarana hanohizana ny fianarako, avy amin'ny fiaviako tsy dia misy mpanohana ahy, ka tena hankasitrahako ny fanohananareo. Feno fankasitrahana sy fientanam-po tokoa amin'ity programa ity aho hahafantarako raha manolotra fampianarana amin'ny toerako fianarako ianao, Public Administration. Mitady scholar aho maimaimpoana. Ampianaro aho hahita.
Ny fahalianako dia ny fitsaboana, ary ny injeniera. Lidet Berhanu. Avy any Nizeria aho mitady hianatra eny ambony sambo Te hahazo an'ity vatsim-pianarana ity aho. Ahoana no hataoko amin'izany. am morris bassey dia nigerianina mila schorlaship hanitatra ny fianarako any ivelany dia tena tiako ny fanohananareo tsara fanahy.
Lehilahy Zambiana 31 taona aho, ary manana mari-pahaizana momba ny asa-tanana amin'ny herinaratra ary te hanao diplaoma amin'io sehatra io ihany aho. Tena faly ianao raha afaka manampy ahy amin'ny vatsim-pianarana maimaim-poana ianao mba hitahiry ny nofiko. Am Okorolal Berochan avy any Oganda.
Ankasitrahako ny ezaka ataonao amin'ny fampifandraisana ireo mpianatra liana hahazo vatsim-pianarana, tiako ny rahoviana, amin'ny fomba ahoana ary iza no mahafeno fepetra amin'ny vatsim-pianarana?
mampiaraka anio hariva akaiky Antsiranana Madagaskar;
Autism and the Rouses Malagasy?
Raha tsy izany dia mitazona LLB aho ary te hianatra LLM any amin'ireto firenena manaraka ireto ohatra UK, US, Canada, Ireland na Australia. HI, IZAY REHETRA NY ANARAKO DIA GARY DANIELS ETO ANATIN'NY UGANDA. izaho Aler South Sudan dia avy amin'ny zom-pirenena manana taratasy fanamarinana amin'ny lisea, tena mila vatsim-pianarana aho. ampio fanampiana azafady ………….. Hi Jenny Luff no anarako tena mila mahazo vahana vatsim-pianarana aho. Misaotra ny valin-teninao. Fanamarihana: manao ahoana ianao fadzai joni avy any Zimbabwe.
Robert Sam Dennis no anarako avy any Liberia ary tiako ny fotoana hanomezana an'ity vatsim-pianarana ity amin'ity vondrona mpanao asa soa ity. Te hankasitraka ny fanomezana vatsim-pianarana aho amin'izany fotoana izany hampandroso ny fianarantsika. Salama ny anarako dia Isaka te hanana an'ity vatsim-pianarana ity azafady mba asehoy anay ny rohy hampiharana. Salama, Gumersindo no anarako, mila vatsim-pianarana feno aho hanenjehana ny mpitatitra ahy, satria tsy manam-bola amin'izany aho.
Ho vonona aho raha misy ny fotoana omena ahy. HELLO, NY ANARAKO ANIO FA CONNEH, Azoko atao ve ny mahazo tombony amin'ny fianaranao amin'ny sekoly.
Azafady, aty Afrika aho ary liana ny hianatra any ivelany ary maodely koa aho Avy any Atsimo atsimo Nanatevin-daharana ny indostrian'ny maodely aho tamin'ity taona ity Ary tiako ny manohy ny diplaomako Ao amin'ny Oniversite fa noho ny olana ara-bola izao dia ato an-trano fotsiny aho Saingy tiako ny mianatra lavitra kokoa hanamafisana sy hanazavana ny hoaviko Ary te-ho aingam-panahy ho an'ny vehivavy Afrikana maro any aho, Misaotra.
Azafady, aty Afrika aho ary liana ny hianatra any ivelany Raha misy vatsim-pianarana azafady ampahafantaro ahy ry malalako Misaotra. Sudan atsinanana aho hatramin'ny nahavitako ny fianarako teny amin'ny lise dia tsy nanararaotra nanala ny diplaomako tany amin'ny oniversite aho noho ny olana ara-bola.
Iam mussie teklebrhan avy any eritrea dia nahavita ny fianarako collage nandritra ny telo taona tamina diplaoma ambony momba ny haitao institiota eritreana.. iam dia liana tokoa aho hanatevin-daharana sy hianatra momba ny fanamboarana hatramin'ny nahavitako ny fanamboarana. ka te hiditra aminao aho.. mba mifandraisa amiko amin'ny telefaona Salama Am Ayouch Avy any Etiopia Ny nofiko dia ny hianatra any ivelany mba hahazoana fanabeazana ho an'ny mari-pahaizana mba ampio aho ho tonga Dr izay nofiko izany Misaotra anao.
Mila vatsim-pianarana feno vola hianarana any ivelany amin'ny siansa informatika na injenieran'ny rindrambaiko aho, tena hankasitrahako ny fankasitrahanao. Te-hangataka mari-pahaizana MSC momba ny harena voajanahary, mpampianatra amin'ny ala…. toy ny taranja mifandraika amin'izany.
Satria nahavita ny mari-pahaizana bakalorea hatramin'ny avy any India aho ary mitady vatsim-pianarana hanenjehana ireo maîtrise any ivelany. Bnjour je Elisabeth Mansaré aidez moi à obtenir une bourse d'étude afin que je puisse Continuer mes études. Ampio aho azafady mba hahazoako ny MyMsc amin'ny injeniera elektrika hahafahako manohy ny fianarako saingy tokony ho vatsim-pianarana feno vola avy any Afrika aho avy any Etiopia azafady mba valio aho fa izany no hatsaram-panahinao lehibe indrindra.
Nangataka tamim-pitiavana Mba hahazoana ny fidirako any uk ho an'ny politika. Ampianaro aho azafady fa avy any Etiopia aho manodidina ny toerana mahaliana ahy Andriamanitra dia misaotra. Salama aho fa mailaka aho mila mianatra any ivelany dia avy any kenya aho dia liana amin'ity vatsim-pianarana feno ity amin'ny programa momba ny kaonty sy fitantanam-bola.
Ampio aho, te hianatra any ivelany aho fa tsy manam-bola. Azafady azafady mba omeo vatsim-pianarana aho. Azafady azafady ny fangatahako ho mpangataka ho an'ny vatsim-pianarana hianatra momba ny fitsaboana 💉 any amin'ireo oniversite tianao indrindra any Etazonia. Am Pascal Macumi. Manana D7 amin'ny sekoly fampianarana mpampianatra aho! Fa te-hanohy ny fianarako amin'ny bakalorea amin'ny siansa Bsc sy informatika aho.
Ampio aho azafady!!!! Tiako ny tolotra nomenareo Baiboly Ny fianarako dia te hianatra any Etazonia aho, izany no fifandraisana amiko raha mila fanazavana fanampiny Tiako ilay tolotra Fa ny nofiko dia te ho pastera Ianareo manana couse BAIBOLY. Fanamarihana: Mila vatsim-pianarana feno vola aho hianarana siansa Acturial amin'ny taona Kudzai Zhuwaki im avy any Zimbabwe no anarako. Manana ny zava-drehetra ilaina amin'ny avo lenta aho.
Faly aho fa mangataka vatsim-pianarana, avy any Etiopia aho. Mianatra mari-pahaizana bakalorea aho ary tena liana ny ho kandidà amin'ity programa vatsim-pianarana ity. Je m'appelle MBAYANI MACCHA Rgavie Charlem, je suis en republique du congo et je fais un bac D. Je cherche une bourse entiere qui pourrait m'aider à étudier à l'etranger. Mais pouvez-vous m'aider à trouver un université s'il vous plait afin que je postule?
Ampahafantaro tsara ahy ny vatsim-pianarana feno famatsiam-bola ho an'ny Masters in Public Health MPH. Izaho no tompon'ny B. Diplaoman'ny Hydraulic and Water Resources Engineering. Mangataka anareo aho mba handinika tsara ny fangatahako. Raha mahatsapa ianao fa mety ho an'ity toerana ity dia azonao atao ny mifandray amiko amin'ny adiresy manaraka etsy ambany raha tianao. Manantena aho fa izaho no olona mila anao!! Misaotra ny fijerinao!!! Raiso ny haja amam-boninahitra atolotra anao! Damtew Degefe Merga.
com Email: ddwarqitu89 gmail. com Face Book: Damtew Degefe. Salama daholo ny anarako kassim Guye avy any Etiopia aho! manana mari-pahaizana butchler aho amin'ny fiteny anglisy sy literatiora tiako hianarana amin'ny fiteny abroady!! ity ny whatsappy no antsoy aho. Bonsoir, j'ai honneur de solliciter, au près de vous aider, pour obtention d'une bourse études à l extérieur, je suis en première année de filosofia, je veux approfondir mes connaissances, pour mieux les incluquer au génération futur, je suis orphelins de père, c 'est ma mère qui se débrouiller pour subvenir à mes études ,.
Fanamarihana: je suis interesse, pourriez vous m'aider a trouver une bourse d'etudes pour Usa!!! Fanamarihana: ampio aho hahazo vatsim-pianarana feno tohana amin'ny undergraduate amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana indrindra ao Anesthesia. Ry Mary malala, izaho no Jacob Kuan avy any Sudan atsimo. Faly be aho raha afaka manampy ahy hanana vatsim-pianarana amin'ny ho avy hianatra bebe kokoa ianao, satria marefo tanteraka aho handoa ny sarany any ivelany. Izaho dia nahita an'i Alana avy any Etiopia.
Manana mari-pahaizana momba ny fahasalamam-bahoaka aho. Salama ny anarako dia Ayman avy any somalia te hifaninana amin'ny lisea tiako aho ary manantena ny hanampy ahy izay nomber. Alexandr no anarako. Zokiolona ato amin'ny Niwot High School any Colorado aho izao ary ao anatin'ny The International Baccalaureate Program any.
Izaho dia ao anatin'ny programa mitarika sy mpilatsaka an-tsitrapo maro ao amin'ny sekoliko, ary tiako ny maha-mpikambana ahy ao amin'ny ekipan'ny teniko sy ny filalaovako. Niditra an-tsokosoko tao amin'ny klioba maro tao amin'ny sekoliko koa aho, toy ny toekarena, simia ary klioban'ny siansa miaraka amin'ny maha anisan'ny The National Honor Society. Ho an'ny taom-pianarana , nanolo-tena hanatrika ny University of Colorado Boulder, College of Engineering ary Applied Science aho.
Ankasitrahako ny fanampianao amin'ny fanampiana ahy amin'ny loharano izay mbola azoko ampiharina ary heverinao fa mety amiko izany. Ampio aho hanampy ahy handray ny mari-pahaizana licence any ivelany momba ny siansa informatika mba ho vatsim-pianarana feno avy any Afghanistan sy 24 taona aho. Askebir Mekie aho dia dokotera mpitsabo avy any Etiopia ary te-hanomboka ny maha-mponina ahy aho ary miandry ny vatsim-pianarana. Salama avy any Etiopia aho manana mari-pahaizana Bsc momba ny injeniera mekanika fantatro fa te hianatra programa maoderina mihoatra ny oniversiteo aho.
Mangataha fangatahana amin-katsaram-panahy sy am-panetren-tena mba mila mianatra any amin'ny firenenao aho. Izaho dia Melisew Worku avy any Etiopia Nianatra ny mari-pahaizana voalohany tao amin'ny oniversite Gondar momba ny fitantanana ary mianatra koa ny mari-pahaizana master amin'ny MBA ary miasa ao amin'ny banky ara-barotra etiopia no banky lehibe indrindra eto amin'ny firenena fa izao kosa te hianatra taranja mifandraika amin'izany.
raha mahazo fotoana aho dia ho faly aho manantena ny valinteninao tsara raha vantany vao afaka ianao. Salama Ny anarako dia Maxamed avy any Somalia 23 taona aho. Manana mari-pahaizana injeniera sivily tiako hamitana ny fandaharam-pianarako ka tiako hoheverina ho mandroso ny fianarako. Manantena ny handre anao. Avy any Etiopia aho, mila fanampiana amin-katsaram-panahy aho hidirana any ivelany ho an'ny phD amin'ny fitantanana fiaraha-miasa na amin'ny sehatry ny asa, mba hahafahako manohy ny fianarako fa tokony vatsim-pianarana feno.
Related fanampiana mampiaraka Madagaskar
Mampiaraka olona an-tapitrisany Fianarantsoa Madagaskar
Mpanazatra mampiaraka tsara indrindra ao Fianarantsoa Madagaskar
Mihantona maimaimpoana Antsiranana Madagaskar
HOOK UP Fianarantsoa Madagaskar